ဘယ် website ကပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ် file အမျိုးစားပဲဖြစ်ဖြစ် online ပေါ်ကနေ download ဆွဲနိုင်သော နည်းလမ်း ~ (IT) ကိုထိုက်
ဘယ် website ကပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ် file အမျိုးစားပဲဖြစ်ဖြစ် online ပေါ်ကနေ download ဆွဲနိုင်သော နည်းလမ်း
4:43 AM Download ဆွဲနည်းများ No comments
Android Page ဆိုပေမယ့် Android နဲ့မဆိုင်လဲ ဗဟုသုတဖြစ်စရာဆိုရင် ကျွန်တော် တင်မှာပဲ။ အခု နည်းလမ်းကတော့ ကျွန်တော် ရှာတွေ့ထားတဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးမို့ အားလုံး ဗဟုသုတ ရရှိရင် ရေးလိုက်ပါတယ်။ website တစ်ခုရှိပါတယ်။ နာမည်က File2HD.com ဖြစ်ပါတယ်။ ထို website ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ web ပေါ်မှာ file များကို ကွန်ပျူတာထဲသို့ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ download ဆွဲနိုင်ဖို့ရာ ကိုယ့်ဘက်ကနေ သိထားရမယ့် အချက် (၂)နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။
ပထမတစ်ချက်က ကိုယ် download ဆွဲချင်ရဲ့ web page ရဲ့ URL (လိပ်စာ) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်က ကိုယ် down ချင်တဲ့ file အမျိုးစား (extension) ဥပမာ video ဆိုရင် .avi , .flv , .mp4 စသဖြင့် file extension က်ို သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ထက် သတိပေးချင်တာက connection ကောင်းရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ချို့ download များတွင် resume မရသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာ downloader software မှ သုံးစရာမလိုပဲ download ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအနေဖြင့် youtube video တစ်ခုကို ဒေါင်းချင်တယ်ဆိုပါစို့ ..
youtube ကနေပြီး ကိုယ်ဒေါင်းချင်တဲ့ video ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Page URL (လိပ်စာ)ကို File2HD.com ရဲ့ URL ဆိုတဲ့နေရာမှာ copy ကူးပြီး Paste လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ညာဘက်ဘေးက Get Files ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် စာကြောင်းတွေ အများကြီး ကျလာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒေါင်းချင်တာက youtube က video ဖြစ်လို့ file extension အနေနဲ့ .avi , .mp4 , .flv စသဖြင့် video ဖိုင် extension ကို ထိုကျလာသော စာကြောင်းများထဲမှ လိုက်ရှာရပါမယ်။ ရှာရခက်မှာ မပူပါနဲ့။
Ctrl + F ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ဘက်နားမှာ Find ဆိုပြီး search box လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ထို box ထဲမှာ video extension တစ်ခုခုကို ရိုက်ကြည့်ပါ။ များသော အားဖြင့် youtube video တွေမှာ .flv , .mp4 format တွေများပါတယ်။ .flv လို့ရိုက်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ video file ရှိတဲ့ စာကြောင်းကို လမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ တွေ့ပြီဆိုရင် ထိုစာကြောင်းပေါ်ကို Right Click နှိပ်ပြီး save link as ဆိုတာကိုရွေးကာ မိမိ သိမ်းလိုသောနေရာကို ညွှန်ပေးလိုက်ပါ။ စတင်ပြီး download ဆွဲပါပြီ။ ဒါ youtube video များကို ဒေါင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။
flash game တွေ ဒေါင်းချင်တဲ့အခါမှာလည်း ဒီနည်းအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ flash game website များမှာ ကစားခွင့်ပဲပေးပါတယ်။ ဒေါင်းလို့မရပါဘူး။ ဂိမ်းကိုကြိုက်လို့ ဒေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကစားနေတဲ့ ဂိမ်း Page လိပ်စာကို copy ကူးပြီး File2HD.com မှာ Paste လုပ်ပါ။ Get Files ကိုနှိပ်လိုက်ရင် စာကြောင်းတွေ အများကြီးကျလာပါမယ်။ flash game ကို လိုချင်တာဖြစ်လို့ .swf ဆိုတာကို ရှာရပါမယ်။ Ctrl + F ကိုနှိပ်ပြီး .swf ဆိုပြီး ရိုက်ကာ ရှာလိုက်ပါ။ များသောအားဖြင့် .swf တွေမှာ link နှစ်ခု တွေ့တတ်ပါတယ်။ အတူတူပါပဲ။ ကြိုက်တဲ့ link ပေါ်ကို Right Click နှိပ်ပြီး save link as ကိုရွေးကာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် သဘောကျတဲ့ flash game လေးတွေကို ဒီနည်းအတိုင်း ဒေါင်းပါတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး တစ်ခါတစ်လေ flash game လေးတွေက လူကို အပျင်းပြေစေတယ်။
ကျန်တဲ့ file အမျိုးစားတွေကိုလဲ ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက notepad နဲ့ မှတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေး ဖိုင်တွေ ရှင်းရင်းပြန်တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးက သိတဲ့သူလဲ များမှာပါ။ ကျွန်တော်အရင်တုန်းက သုံးတယ်။ အခုတော့ IDM နဲ့ပဲ ဆွဲဖြစ်တော့ မသုံးဖြစ်တော့ဘူး။
Credit to Mr.ADand
MTK တွေရဲ့ Firmware တွေကို Backup လုပ်ပေးမယ့် MTK ...
Samsung Galaxy S4, Galaxy Grand Duos တွေမှာ မြန်မာ...
အသစ်ထုတ် MX Player (V 1.7.19 ) Apk
ဗီဒီယို file တွေအကုန်လုံးကို format ပြောင်းပေးမဲ့ ...
C++ မြန်မာလို eBook vol_1,2 and 3
Battery တွေအတွက် မရှိမဖြစ် Battyer Booster (Full )...
SMS တွေကို cloud ပေါ်မှာ သိမ်းပေးမဲ့ Cloud SMS v2.1...
Window Phone7အတွက် Facebook .XAP
World Conqueror2v1.19 apk (49MB)
AgRacer Version 1.4 ( Android Game )
ကိုယ်တိုင်လေ့လာ Youtube သင်ခန်းစာစာအုပ် (မြန်မာလို...
Internet နှင့် Website ဆိုသည်မှာ...
Modem တည်းတွင် SIM Card မရှိဘဲ အင်တာနက်အသုံးပြုနည်...
Huawei Network Unlock Code စာရင်းများ ကြော်ငြာခြင်...
အွန်လိုင်းပေါ်မှာငွေရှာနည်း အပိုင်း(၂) google adsen...
လစဉ် အသုံးစရိတ်တွက်ပေးမယ့် Apk (For Android)
Phone တစ်လုံးမှာဘာအလိုအပ်ဆုံးလဲ ?
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အင်တာနက်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြ...
Andriod ဖုန်းမှာ ဘောလုံးကစားချင်သူများအတွက် PES 20...
Talking SMS and Caller ID
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေသူများအတွက် ဆရာလွတ်အင်္ဂလိပ်စာရေးနည...
Android Phone မျိုးစုံ Root လုပ်နည်း Ebook (ပုံနှင...
Lattop battery ကိုသက်တမ်းကြာကြာထိန်းသိမ်းပေးမယ့် b...
Facebook (V 2.1 For Android)
ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် အမြန်ဆုံးထည့်ပေးမယ့် EZCharge2A...
Music Player ကြိုက်သူတွေအတွက် jetAudio Music Playe...
Programming လေ့လာနေသူများအတွက် Java developerguide...
မိမိတို့ ရဲ့desktop ; latop ကနေ tv channels 3000...
ဘယ် website ကပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ် file အမျိုးစားပဲဖြစ်ဖြ...
Android ဖုန်းကို Profile တွေနဲ့ သုံးမယ်
Facebook ပေါ်တွင် လှုပ်ရှားနေသောပုံတွေကိုတင်ကြမယ် [...
Website ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်လေ့လာမည့်သူများအတွက် အခြေ...
A+ ကို အခြေခံကနေလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက် အခြေခံသိသင့်သိ...
ကွန်ပျူတာအခြေခံနှင့် Window7အသုံးပြုနည်းစာအုပ် (...
iPhone Tips Ebook ( မြန်မာလို )
သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ( Network Ebook - မြန...
Facebook အကြောင်း သိကောင်းစရာများ (မြန်မာ) EBook
Phone Message ကို PC ကဖတ်မယ် ၊ ပို့ မယ်။
HTC ရဲ့ Official Website ကို မြန်မာလို ကြည့်နိုင်ြ...
FL Studio Mobile 1.1 (ဖုန်းထဲကနေ Music တွေဖန်တီးချ...
ကွန်ပျူတာထဲက Programs တွေကို ဖြုတ်မရ ဖြစ်နေသူများအ...
ဆရာသန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) ရေးသားထားတဲ့ Mobile ကွန်ယက်န...
Next ကနေထုတ်အသစ်ထပ်ထုတ်လိုက်ပြန်တဲ့ Next Browser
YOUTUBE DOWNLOADER FULL VERSION
Mobile ဖုန်းအင်တာနက်ကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးမဲ့ နက်ဖ...
Veetle (Android Device တွေပေါ်ကနေ Live Video တွေကြည...
အချိန်နဲ့ တပြေးညီပြောင်းလဲနေတဲ့ ငွေလဲနှုန်းတွေကိုြ...
viber နောက်ဆုံးထွက် (V 3.1.1.15 )
We Chat သုံးတဲ့သူငယ်ချင်းများအထူးကြေငြာပါတယ်
သင့် facebook account ထဲက userတွေကို backup လုပ်ချ...
“Android Applications Development” သင်တန်းဖွင့်လှစ...
Root Explorer 3.1
အသစ်ထုတ် Swype Keyboard v1.5.12.19292 Apk
Windows7ပေါ်မှာ Run Box ကို ပေါ်အောင်လုပ်မလား၊ ဖျေ...
Whatsapp ရဲ့အသစ်ထုတ် WhatsApp Messenger (V 2.11.23...
PC မှာ ကားပြိုင်ဖို့ Deadly Race Free Full Version...
MPT Service V1.0.0(GSM ဖြစ်ဖြစ် CDMA ဖြစ်ဖြစ် ငြွေ...
Huawei Product ID Generator
Fix Windows7All Icons Same Problem (Desktop Shor...
Internet Lock 6.0.3 Final (ကိုယ် မကြည့်စေချင်တဲ့ W...
IT စာအုပ် မျိုးစုံ Links နှင့် စာအုပ်များ အခမဲ့ ဖတ...
Networking စာအုပ်များစုစည်းမှု ( မြန်မာလို )
GO Battery Saver & Power Widget (V 4.13 )
Next Nexus ရဲ့ Live Wallpaper အသစ် PRO v1.4.1 Apk
Vroot v1.5.2 လာပြီ...!!!
အင်တာနက်ပေါ်မှ Download ဆွဲကြရာဝယ်
My Computer Right Click Context menu မှာ "Manage" ...
မြန်မာရွက်ဆုတ်ပြက္ခဒိန် v1.0 (For iPhone, iPad, iPo...
MicroSD Card RecoveryPro v2.9.9 (Memory Cards မျို...
Huawei T8951 Root လုပ်နည်း
Window Defender ဆိုတာ
မိမိတို့နှစ်သက်သော ဘလော့ဆိုဒ်များအား Android ဖုန်း...
Laptop ဘက်ထရီ ကို အချိန်ပိုကြာစေရန်
LG optimus P705ကို Root လုပ်ချင်တဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွ...
ANDROID ဖုန်းတွေအတွက် PC ကနေusb သုံးပြီးအင်တာနက်သ...
Video တွေကို ဒေါင်းယူနိုင်သလို မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်တ...
Glory of Generals HD apk for android
Subway surfers Beijing hack version for android
Hacking Ebook Myanmar Version (7အုပ် ) မြန်မာလို...
USB,Memory Card တွေ Format ချမရရင် (Lexar USB Form...
Facebook Latest Version v3.6 Apk
Android ဖုန်းတွေ့symbian ဖုန်းတွေနှင့် PC အတွက်ပ...
့android အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာပြီးတစ်နေရာတည်းနဲ့ အဆ...
New Gmail 4.5 APK
Gmail ထဲက Attachment ဖိုင်တွေ၊ Image ဖိုင်တွေ လွယ်...
Internet ကို SpeedConnect Internet Accelerator v.8...
တယ်လီနောသို့ အီးမေးလ်မှ အလုပ် စလျှောက်နိုင်
နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းစာရင်း Android ကနေကြည့်လို့ရမယ...